Sawir qaade 101 leh Paul D'Andrea | Martech Zone
Sunday, May 4, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Paul D'Andrea iyo waxaan la kulanay markii aan ka shaqeynayay Xaqiiqda. Sida horumariyeyaal badan oo hibo leh, Bawlos wuxuu leeyahay hal abuur, dhinac farshaxan sidoo kale. Dareenkiisa ayaa ah sawir. Mid ka mid ah Sawirada Bawlos ee Coyote ee qabuuraha deegaanka waa bishaan Indianapolis Magazine Bille ah.
Kirismaskii hore, aniga iyo wiilkaygu waxaan soo iibsanay a Nikon D40 SLR kamarad dijital ah gabadhayda, Katie. Katie waxay xiiseyneysay sawir qaadista waxaanan dooneynay inaan saxno. Aniga iyo wiilkayga, Bill, ayaa galay wax soo saarka muusikada iyo muusikada, Katie waligeed runti ma ahan tii laga helay alaabada tikidhada waa weyn. Marka aniga iyo Bill waxaan ka dhignay a Katie Christmas oo ku hagaaji shaqooyinka - boorsada dhabarka, kamarada, muraayadaha indhaha, seddex… adigu magacow!
Galabtani waxay ka mid ahayd Katie sannad-guuradeeda 14-aad - iyada casharkii ugu horreeyay ee sawir qaadista ahaa ee Bawlos. Waa macallin weyn - aad u dulqaad badan oo aan caadi ahayn. Gabadh yar oo 14 jir ah ayaa laga yaabaa inaanay noqon ardayga ugu fiican, laakiin Bawlos runtii wuxuu furay fahamkeeda kamaradda iyo awoodeeda.
Kadib casharkii fadhiga, Paul iyo Katie waxay ku wareegeen agagaarka Monument Circle halkan Indianapolis. Waxay ahayd maalin qurux badan. Sawirada Katie ay kuqaaday hanuunka Bawlos waxay ahaayeen kuwo naxdin leh Waa kuwan kuwa ugu cadcad maanta. Haddii aad jeceshahay, iska hubi kan buuxa set on Flickr.
Bawlos wuxuu yiri kani waa kan uu jecelyahay Katie's. Waxay ku qaabeysay taallo ku dhex taal laamaha geedaha qaarkood ee nalalka ku leh:
Anigu sawirqaade ma ihi, laakiin markaan soo qaado Nikon oo aan toogto midkoodna uma qurux badna sida kuwan! Katie waxay qaadaneysaa xoogaa sawirro ah toddobaadyada soo socda ka dibna cashar kale ayey u aadaysaa Bawlos si ay dib ugu eegaan oo ay wax yar uga bartaan.
Haddii aad ku nooshahay agagaarka Indianapolis oo aad rabto inaad wax badan ka hesho Kaameraddaada Digital SLR, hubi inaad Bawlos u soo wac wicitaanada casharrada qaarkood!
Tags: ololaha juqraafijuqraafi ahaan mobiladajuqraafiwordpress mobiladaMedia Social Suuqqaylobeegsiga cimiladawordpress plugin mobilejeexjeexanwptouch pro
Sawirro wanaagsan. Dhoolatusyo wanaagsan oo aan ka helay aaladda dhismaha.
Waad ku mahadsantahay boostada, Doug. Waqti aad u wanaagsan baan idin la qaatay; mana codsan karno cimilo wanaagsan. (Waxaa laga yaabaa in daruuraha qafiifka badani ay fiicnaan lahaayeen. Cirka oo buluug ah oo nadiif ah ayaa badanaa ka dhigaya caajis gadaal ah.
Hadiyad weyn; waxay umuuqataa inaad mustaqbal leedahayAnselette”Gacmahaaga. 🙂
Laakiin ha dareemin wax xun, sawirradaydii ugu horreysay oo aan la leeyahay D40 aniga ayaa si fudud u xun. Waa kamarad aad u fiican laakiin waxay u baahan tahay ballanqaad dhab ah barashada sawir qaadista si ay awood ugu yeelato inay sawirro wanaagsan ka bixiso, ballanqaadka gabadhaada ayaa si muuqata u muujinaya oo ay weheliso caawinta Bawlos
Sannadkii la soo dhaafay waxaan runtii ku riyaaqay D40 (sawiradayda Flickr) oo uu ka bartay tan Kulan sawir Atlanta ah, taas oo ahayd wax weyn. Ma hubo sida ay u wanaagsan tahay, laakiin waa inaad u qaaddaa Indianapolis Photoupupupupuping oo aad siisaa isku day.
PS Iska ilaali, in kastoo, haddii ay si dhab ah sawir u gasho laga yaabo inay ka weynaato D40 oo waxay noqon doontaa waqtigii ay ugu sii gudbi lahayd moodel Nikon ka fiican, oo lagu dhammaystiray dhowr $ 1000 + lenses. Xaqiiqdiina ma rabi doontid inaad dib u dhigto, hadda miyaad dooneysaa?
Heh; ha dhihin kumaan digin. 😉
Katie marwalba waxay ahayd hogaamiye weyn, abaabule iyo farshaxan. Waxaan mar horeba ka dareemay dhinaca $ $ $ $! Waxaan dhawaan u keenaynaa flash Nikon SB600 ah… waana hubaa in muraayadaha indhaha ay xigaan. Bawlos wuxuu nala wadaagay muuqaalkiisa zoom lense ee leh gyro gudaha ah si meesha looga saaro ruxitaanka… wow!
Xaqiiqdii waan hubin doonnaa Kulanku - aad baad ugu mahadsantahay xiriirka !!!
Wiilkaygu waa muusikiiste, sidaa darteed waxaan ku socday wadada in muddo ah maalgashiga looga baahan yahay hiwaayadaha! Si kastaba ha noqotee, waxaan aaminsanahay in kuwani ay ka caawiyaan iyaga inay dhisaan kalsooni isla markaana ay siiyaan wadiiqo hal abuur leh oo dugsiyadu mararka qaarkood aysan sameynin.